Simba Rako Kwepamhepo Kushambadzira neCDNify | Martech Zone
Chishanu, April 26, 2013 Mike Cunsolo
Isu tese tange tiripo handiti. Kushanda nesimba pamushandirapamwe wekushambadzira wevatengi vako, uchiita maawa ekupenga uye kuwanda-tasking senge akanakisa acho. Kuedza nepese paunogona napo kuti uve nechokwadi chekuti zvese zviri munzvimbo, kuti zvinhu zvimhanye zvakanaka sezvinobvira kana iwe uchienda kurarama. Ini ndave ndiripo uye ndarasikirwa nehuremu hwemaawa andapedza ndichimhanya ndichitenderera kunge benzi. Asi kunakidzwa chikamu chakakura chekuti nei uchidaro ini nekuti wobva watanga uye unosvika pakuona iro rese basa rakaoma kutanga kubhadhara.
Vanhu vari kuita nezvako zvemukati uye nekuzvigovana. Kuziviswa kwechiratidzo chemutengi wako kuri kuwedzera uye zvese zvaunofanirwa kuita kugara pasi uchiona kuti chiitiko chezvemagariro chinoshanduka kuita shanduko yewebhusaiti. Nguva yekuvhura doro.
Asi ipapo, paunenge uchivhura bhodhoro rako rechipiri, chinhu chakaipisisa chinoitika! Yako webhusaiti inokuya kuti imire pasi pekushushikana kwetraffic. Parizvino hapana zvakawanda zvaunogona kuita kunze kwekunge watove ne backup munzvimbo (kunze kwekunge vhura iyo yechipiri doro).
SaDhijitari Kushambadzira maneja Ini ndinongoda kuziva mushandirapamwe wangu uchashanduka kuita shanduko. Ini handigare ndine nguva (kana ruzivo rwehunyanzvi kana ndiri akatendeseka) kufunga nezvekuti nzvimbo yatiri kutumira vatengi vangangomira sei kuwanda kwetraffic.
Ndipo pacho CDNify inogona kukubatsira iwe.
CDNify Kutanga kwandinoshandira seCMO, yakavambwa naJames Mulvany. Nzira yakanakisa yekutsanangura james ndeye muvambi. Ndiye mhando yemunhu anonzwisisa kutora zvinhu zvakaoma uye kuita kuti zvive nyore kusangana nazvo. Uye ndizvo zvinoita CDNify. Zvinotora chimwe chinhu chinowanzo shungurudza kuita uye kuchirerutsa.
Kana iwe wakamboedza kuita content delivery network (CDN) zvisati zvaitika, iwe unozoziva kuti hachisi chinhu chiri nyore kuita kuti musoro wako utenderedze. Maitiro muindasitiri iyi 'saizi imwe inokodzera zvese', inova nzira yemoto yekuzvisiya wabva muhomwe uye uchibhadhara masevhisi ausingade. Ichi chinhu chatiri kuedza kuchinja.
CDNify iri yemukati yekuburitsa network iyo inoita kuti zvive nyore nyore kuwana CDN kumusoro uye kumhanya. Inokurumidza kutanga uye kupfuura zvese, zvinotora zvemukati uye nekuzvipa kune vateereri vako nekukasira - zvinoreva kuti haufanire kunetseka nezvezvinhu zvakaoma uye unogona kutarisa mukuendesa mushandirapamwe unoshamisa panzvimbo.
Nekushandisa CDNify unogona kutaura zvakanaka kumisheni traffic spikes inogogodza yako saiti isingaiti. Nekuti isu tiri 'federated' CDN isu tinokwanisa kuparadzira zvemukati mukati medu gore network, tichideredza nguva dzekuremedza uye nekuona yako saiti inogona kusimuka kumatrages masaizi. Izvi zvinoitawo kuti iwedzere kudhura uye zvinoreva kuti iwe unongobhadhara chete iyo data iwe yaunoshandisa.
Kubatsira kukuru kwekuve a mubatanidzwa ndeyekuti isu tinogona kusvetuka pakati peakasiyana makore network, zvichitibvumidza kuti tikurumidze kuendesa zvako zvemukati zvichibva nenzvimbo yako yevateereri. Izvi zvinopa chiitiko chinokurumidza, chinonakidza kwavari uye chinokubatsira iwe kuwedzera yako mhedzisiro mhedzisiro nekushandura mboni dzemaziso kuita mabhatani.
Isu ikozvino tine 40 POPs pasi rese uye isu tiri kukura iyi network nguva dzose. Tiri kushandawo pamatanho ekubatanidza kuita kuti kushambadzira kwako kuve nyore kunyangwe uine chikuva chipi chauri kuendesa icho mushandirapamwe.
Unogona kusaina kwevhiki mbiri yemahara kuyedzwa izvozvi pa www.cdnify.com uye tichava tiripo kuti tikubatsire kutanga.
Mike Cunsolo ndiye CMO we CDNify, yemukati yekuburitsa network izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana CDN kumusoro uye nekumhanya.